I-Aquamarine, ebizwa ngesiLatini isho ngokuthethileyo inqaku elithi "amanzi olwandle" - ilitye lokuhle okumangalisayo. I-Aquamarine ngaphandle ifana ne topazi okanye enye yeentlobo zefireshi, nangona ngokwenene ayinanto efanayo. Umbala weli tye linokuba luhlaza kunye nolubluhlaza, kodwa into ebalulekileyo kukuba ilitye libonakala limbini-umbala-kubalulekile ukuguqula intloko kwimiba eyahlukileyo, kwaye umbala sele ushintshile.
Ingqungquthela ephezulu yale nqanawa yinto ebonakalayo ekukhanyeni kwelanga. Ezi zakhiwo ze-aquamarine zichazwe yizinzulu zesaziso zesaziso zeramali. Ngokomzekelo, amatye abanjwe eBrazil, kwimigodi eyayibizwa ngokuba yiMaxix, yayingumthunzi ohlaza okwesibhakabhaka ophezulu, kwaye emva kokuqhagamshelana okufutshane kunye nemibala yelanga bafumana umbala obomvu nolubomvu obomvu. Nangona kunjalo, nangona kunjalo, i-aquamarine ixabiseke kakhulu kwi-business yezinto zokugqoka.
Le mithombo yamanzi imangalisayo ithathwa ngokuba yimpembelelo eyahlukeneyo, njengokuba, umzekelo, ukuphatha umnikazi wayo ekukhuliseni ulwandle, akumangalisi, ngokucinga ukuba kumaxesha amandulo abantu babecinga i-aquamarine "umphefumlo wolwandle." Kwaye, abantu abanolwazi bakholelwa ukuba le mineral iyakunciphisa intlungu yamazinyo, intlungu yesibindi kunye nentlungu yesisu, kwaye abantu abanokubukeka kakubi, ngombono wabo, bayakwazi ukuyibuyisela xa bejonga i-aquamarine ixesha elide. E-Indiya, kusekholelwa ukuba eli litye linokugqithiswa ngabantu base-crystal-true, kuba ayikunyamezeli ubuxoki, kwaye kunokunceda ukutyhila iingxoxo kunye neenkohliso.
I-aquamarine iyasetyenziswa kakhulu kwiindlela zonyango. Uninzi lwe-lithotherapists sele luqaphele umphumo we-mineraleral kwi-system ye-nervous, metabolism. Intloko, uxinzelelo kunye nokwesaba okungenasiphako kunokunceda ukususa amacici e-aquamarine, kunye nesantya ngeli gwe lize liphilise izifo ze-thyroid. Amadoda aphethwe zizifo zesikhumba ezinganakukhetha ukugqoka amasongo ngamatye.
I-Aquamarine, njengezinye ezininzi iintlobo zebrikri, idla ngokufumaneka kwindalo; Ukukhutshwa kwamatye kummandla welizwe lethu kwenziwe kwiTransbaikalia kunye neeUreals, apho amatye anemibala ebomvu ebomvu, nakwiiLelmensky Mountains, apho umbala we-aquamarine ungasondeza eluhlaza okwesibhakabhaka. Nangona kunjalo, iikristal ze-aquamarine kunye nombala ococekileyo we-azure-bluhlaza ziqheleke kakhulu.
Ukukhutshwa kwamanzi e-aquamarines yinkampani enenzuzo kwaye inenzuzo, ngoko akumangalisi ukuba iinkampani ezininzi zeemigodi ezijolise ekuveliseni i-aquamarines ziye zahlakazeka emhlabeni wonke: zifumaneka kwi-USA, eYurophu nakwi-Afrika. Ubuncoma bobuncwane bamatye obuhle obuhle kunye nexabiso lingaxhaswa ngokukhuselekileyo eBrazil: yilapho unokufumana khona i-aquamarines ene-green tinge kunye ne-white tile-blue colors.
Uninzi lweengcali kunye neengcamango zidibaniswa ne-aquamarines. Akukho mfihlo yokuba i-aquamarine ithathwa njengelitye, imifanekiso engaqondakaliyo engaqondakaliyo enxulumene namanzi nolwandle. Yingakho ngamaxesha onke i-amuamarine amulet ithathwa njengeyona nto ethembekileyo kunabo bonke abantu abahamba olwandle. Ngako oko, kwiMinyaka Ephakathi, xa uluntu lwalunzulu lokufunda izixhobo zaselwandle, eli litye lilingane elifanelekileyo kunye noncedo kubo bonke abaphandi bezilwandle.
Nangona kutshanje ungayifumana iindidi ezahlukeneyo zobugcisa bezinto zobungcweti usebenzisa i-aquamarine njengesigqongo, kusekho iikhoksiki zezohlobo ezikhoyo zisezintanjeni kunye neempendelezo nge-aquamarine. Ngokwezinye iinkolelo, ilitye lifanekisela amandla aloo mandla onamandla njengamanzi kufuneka abe kwisifuba somntu, ngoko unokunika amandla akhe onke inkosi yakhe. I-aquamarine enhle kakhulu ihlala kunye nedayimane, uphawu lweMoya. Olu dibana lusetyenziso lobuntu obungaphantsi.
Omnye umxholo omhle uthi ilitye linokutshintsha umbala ngokuxhomekeka kwimeko yomnini wayo, ulungelelanise kwaye utshintshe umthunzi kwimizuzu embalwa. Kukholelwa ukuba ilitye liba ngumbala obala obomvu, ukuba ingqondo nentliziyo yenkosi iyacaca kwaye ihlambulukile, kwaye ngexesha lokuvutha kwentlungu, intlungu kunye nosizi, ngokuchasene kwaye iyafumana i-tinge eluhlaza. Kwakhona kwenzeka, kwaye xa iimeko zemozulu zithatha. Yingakho ngamaxesha amandulo abantu basebenzisa iikhamera ze-aquamarine ukuze baqaphele imozulu kwaye babone kwangaphambili ngendlela enje ilitye ngaphambili. Ngaphezu koko, ilitye linokutshintsha umbala kwi-dimmer xa ummkeli eqala ukuceba kunye nokucebisa intliziyo emva kwakhe.
Akumangalisi ukuba i-aquamarine evela kwixesha la mandulo lalibhekwa njengelitye elinamandla kwaye liyimfihlakalo kwaye isizathu salo sakhiwo semilingo. Ngokuqhelekileyo eli lilitye lisetyenziselwa ukutyhila icebo elimelene nomntu, ukubonisa ukukhohlisa kwenkwenkwezi nokubonisa izinto ngokukhanya kwangempela. Esi simo sengqondo kwi-crystal ekubonweni kokuqala kubonakala sinomhlaba othile: kwixesha elidlulileyo ababingeleli babecinga njengelitye lobuhle kunye nococeko, umgwebi wezo zonke iinkalo zabantu. Waye wabizwa ngokuba namandla okunciphisa konke ukuqala okubi kunye nokuhlambalaza komntu, ukutshatyalalisa onke amandla akhe kunye namandla angaphakathi ekufezekiseni izinto ezintle, ezizenzekelayo. Nangona kunjalo, kunengqiqo ukuba abantu kuphela abangaqhelekanga ukukhwabanisa kunye nokukhohlisa bavunyelwe ukuba banxibe: ilitye alinyanzelisi abantu abanjalo kwaye ngokukhawuleza lilahlekelwa ngamandla alo. Kwaye mhlawumbi bubi nakakhulu: i-aquamarine, ewele ezandleni zomntu ongendawo, unokuqala ukulwa nenkosi yakhe, ukutyhila zonke izicwangciso zakhe ezimbi kunye nobuqhetseba.
Ngendlela, kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba ngezinye iimpawu ze-zodiac iimpawu ze-aquamarine azikwazi ukufikelela kuzo zonke, iyeka ukusebenza kwaye ivale. Iimpawu ezinjalo zibhekwa njengeSagittarius kunye neGemini. Mhlawumbi oku kubangelwa umsebenzi ogqithiseleyo kunye nomsebenzi wabantu abazalelwa ngeli xesha, kwaye ilitye elixakile xa usebenzisana nabo livale ngokwalo. Kodwa i-Pisces kunye neCanscers inokukhetha ngokukhuselekileyo i-aquamarine njenge-amulet kunye ne-amulet: uya kubanceda, baya kubafundisa ngendlela yonyani.
Njengelitye lokuphilisa, i-aquamarine ingasetyenziselwa ukusebenzisana nabantu abajongene nokusetyenziswa kakubi kotywala, iziyobisi kunye necuba. Ilitye linokunceda umntu ukuba ashiye imikhwa yakhe embi aze azinzileyo. Naye uya kuba ngabasebenzi kubantu abagcina emiphefumulweni yabo imfihlelo yecala legazi: i-aquamarine iya kukhwabanisa into entliziyweni yomntu ngokukhawuleza kunokuba umntu axolele umntu.
Iingcebiso ezifanelekileyo zomzimba ophilileyo
Ucoceko olusenyongweni kumfazi ococekileyo
I-Cystitis: iindlela ezona ndlela zonyango kunye nokukhusela
Ukuphazamiseka kwe-microcirculation emzimbeni womntu
Ibhinqa elineminyaka engama-48 indlela yokunciphisa isantya
Ubuhlungu kwindlebe, yintoni oyenzayo?
Indlela yokujongana nomdla wokuhlala ulambile
UVera Brezhneva akanalo ixesha lokulwa nogaxekile
Amanzi e-Dill amantsana
Igumbi lokulala kwiFeng Shui, iingcebiso
Kwiiveki zokugqibela ngaphambi kokubeleka
Ukupheka i-porridge elimnandi kwisithuba: zokupheka ezilula
Indlela yokulahla ubuninzi beenwele zomzimba, iingcebiso
Uthando lweHoroscope ngo-2015 lweCarcer
Ukutya kwamaprotheni kwabasetyhini abakhulelweyo
Ukuzonwabisa: ukulala, ukulala, isondo, umsebenzi, ukuphumla
I-Pizza kunye nama-meatball, anyanisi kunye ne-parsley
I-Carp kwi-ukhilimu omuncu
I-Crepe Sasett (i-Crepe Suzette)